Photo Essay အတွက် အကြံပေးချက် ၅ချက် – Featured Collectives
Photo Essay အတွက် အကြံပေးချက် ၅ချက်
by Featured Collectives
Articles, Photo Essay
Featured, Featured Collectives, Photo Essay, Street Photography, THT
ဓာတ်ပုံ – Chit Min Maung
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်တို့ဟာ အဓိကကျလာတဲ့ ခေတ်သစ် ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောခြင်းအသွင်သဏ္ဌာန်များ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗီဒီယို မတိုင်မီကတော့ ဓာတ်ပုံဟာ အဓိကကျခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကစတင်ပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောခြင်းတို့ဟာ အတူတကွ လက်တွဲချီတက်လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောခြင်းရဲ့ စွမ်းအားကို ယခင်ကထက် ပိုမို အသုံးချလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုကို ဓာတ်ပုံများနဲ့ ပြန်လည်ပြောဆိုရာမှာ နည်းပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးပါရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အယူအဆ သဘောထားတို့ကို နားလည်တဲ့ ဓာတ်ပုံပညာကျွမ်းကျင်သူများကသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဇာတ်ကြောင်းပြောတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲသလို ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကို Photo Essay လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Photo Essay ဆိုတာဘာလဲ
အဖြစ်အပျက်များ၊ စိတ်ခံစားမှုများနဲ့ အယူအဆ သဘောထားတို့ ဖြစ်ပေါ်မှု အစဉ်အဆက်ကို ပြောပြနိုင်ဖို့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် အစီအစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ဖော်ပြထားခြင်းကို Photo Essay လို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ Lauren Greenfield၊ James Nachtwey နဲ့ Joachim Ladefoged အစရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဓာတ်ပုံသတင်းစာဆရာများ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး Photo Essay တွေဟာ သာမန် Essay တွေနဲ့ တူညီတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်း နည်းပညာများသုံးကာကို ပုံရိပ်များအသွင်နဲ့ ပြောင်းလဲ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း Photo Essay ဆိုတာ ဓာတ်ပုံသတင်းစာဆရာများအတွက်သာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတိုင်းဟာ ဇာတ်လမ်းများရဲ့ စွဲဆောင်မှုကိုခံကြရပါတယ်။ အပျော်တမ်း သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူ ဘယ်သူမဆို မိမိရဲ့ ပုံရိပ်များကို Photo Essay အသွင်နဲ့ အသက်ဝင်လာအောင် ပြုလုပ်ကာ မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကို ခံစားမှုပေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ ခေါင်းစဉ် တစ်ခုကို ရှာပါ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူက မိမိရိုက်ကူးတဲ့ အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အခါမှာ Photo Essay တွေဟာ ပိုပြီး သက်ဝင် လှုပ်ရှားမှု ရှိပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ပထမဆုံး လတစ်လကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းက ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်တင်ဆက်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မွေးနေ့ပါတီတစ်ခုကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ မိမိ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာကို မိမိရဲ့ Photo Essay ခေါင်းစဉ်အဖြစ် တပ်ပါ။
၂။ ကြိုတင်လေ့လာမှု ပြုလုပ်ပါ။
မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ပထမဆုံး လတစ်လကို မှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုပါက မိသားစုနဲ့အတူ အချိန်ပေး နေပေးပါ။ မိဘတွေဟာ ဘယ်လိုလူတွေလဲ၊ ဘယ်လို ယဉ်ကျေးမှုက ဆင်းသက်လာကြတာလဲ၊ လူမှုအနေအထားက ဘယ်လိုလဲ အစရှိသဖြင့် လေ့လာပါ။ ကျောင်းပြဇာတ်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သရုပ်ဆောင်များ၊ ပြဇာတ်အကူများနဲ့ စကားပြောပါ။ ကျောင်းသားတွေကကော ဘာကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဘာကို စိတ်ဝင်စားကြလဲ စုံစမ်းပါ။ ဒီပြဇာတ်အတွက် ကုန်ကျငွေကို ဘယ်လို ကျခံကြသလဲ၊ အကုန်အကျ သက်သာအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြသလဲ လေ့လာပါ။ မွေးနေ့ပါတီတစ်ခုကို ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုပါကလည်း ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပါတီကို ကျင်းပသလဲ၊ အသုံးပြုတဲ့ အဆင်တန်ဆာများ၊ မွေးနေ့ရှင်က ဘယ်လို လက်ဆောင်ကို မျှော်လင့်ထားသလဲ စတာတွေကို လေ့လာပါ။ ဒါတွေက ဘယ်လို ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပြောမလဲဆိုတာကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရာမှာ အကူအညီ ပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ “စစ်မှန်တဲ့ ဇာတ်ကြောင်း” ကိုရှာပါ။
ကြိုတင် လေ့လာထားမှု လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လို ရှုထောင့်ကနေ ပြောပြမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ ကလေးငယ်လေးဟာ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကဖြစ်ပြီး မိသားစုရဲ့ အမွေအနှစ်တွေကို ဆက်ခံသွားမယ့်သူလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးငယ်လေးမှာ ဖြစ်ခဲတဲ့ နှလုံးရောဂါတစ်ခုခု ရှိနေသလား။ ကျောင်းပြဇာတ်က ကျောင်းသားတွေ စည်းလုံးမှုရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ကို အသားပေး ဖော်ပြလိုတာလား။ မွေးနေ့ပါတီက အသက် ၁၃နှစ်ပြည့် လူငယ်လေးအတွက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် သေလုနီးနီး ကင်ဆာရောဂါသည်တစ်ယောက်အတွက်လား။ မွေးနေ့၊ ပြဇာတ် သဖြင့် ဇာတ်ကြောင်းတွေဟာ ထပ်နိုင်ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုစီရဲ့ အဓိက အချက်တွေက အလွန်ကို ထူးခြားမှုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းဟာ ပရိသတ် အသည်းနှလုံးကို ထိခိုက်စေမယ့် အဓိကကျတဲ့ တန်ဖိုးများနဲ့ စိတ်ခံစားမှုများကို အခြေခံထားပါတယ်။
ဒေါသထွက်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ နာကျင်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု အစရှိသည်များ။ မိမိရဲ့ Photo Essay ကို ပရိသတ်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဇာတ်လမ်းအတွင်းက စိတ်ခံစားမှုများကို ဆွဲထုတ်ကာ ယင်းတို့ကို မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံများမှာ အသုံးပြုဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်နဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ကြိုးကိုင် ချယ်လှယ်ဖို့ မဆိုလိုပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ မိမိရိုက်ကွက်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဓာတ်ပုံတိုင်းကို သေသေချာချာ ထိုင်ပြီး ကြိုတင် ပုံဖော်ကြည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းကို စိတ်ထဲကနေ လျှောက်သွားကာ မိမိဇာတ်လမ်းကို ပြောပြဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ရိုက်ကွက်မျိုးကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဝါနုသူများအဖို့တော့ ဇာတ်လမ်းအတွက် မိမိ ရိုက်ကူးရမယ့် ရိုက်ကွက်များကို စာရင်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ရိုက်ကွက်တစ်ခုစီဟာ စာပိုဒ်တစ်ခုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းအတွင်းက စာကြောင်းတစ်ခုစီအဖြစ် အသုံးတော်ခံပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုက်ကွက် ၁၀ခုခန့်ဖြင့် စတင်နိုင်ပါတယ်။ ရိုက်ကွက်တစ်ခုချင်းဟာ မတူညီတဲ့ အယူအဆ၊ စိတ်ခံစားမှုတို့ကို အလေးပေးရပါမယ်။ အဲ့ဒီ ရိုက်ကွက်တွေကို ပေါင်းစည်း ရောယှက်ကာ ဇာတ်လမ်းအတွက် မူကြမ်းတစ်ခု ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောခြင်းအတတ်ပညာဟာ အလေ့အကျင့်ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့ သတိချပ်စေလိုပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ Photo Essay တစ်ပုဒ်ရရှိဖို့အတွက် အလွန်တော်တဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်နေဖို့တော့ မလိုအပ်လှပါဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း နည်းပညာနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း အနည်းငယ်နဲ့ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားတို့ ရှိဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်းများအတွက် ဓာတ်ပုံ စတင်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ သင့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ယခင်ကနဲ့ တူတော့မှာလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
(ဓာတ်ပုံသတင်းစာဆရာမ Christina Nichole Dickson ရဲ့5Photo Essay Tips ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုပါတယ်။ မူရင်း link : http://digital-photography-school.com/5-photo-essay-tips
Christina Nichole Dickson ဟာ Revolutionary Media ရဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်းစာဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး Institute in Photographic Stuides မှာ နည်းပြတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လက်ရာများကို http://www.christinanicholephotography.com/ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။)
ဝန်ခံချက်။ ။ Myanmar Street Photographers တွင် THT ရေးသားခဲ့သော Photo Essay အတွက် အကြံပေးချက် ၅ချက် ဆောင်းပါးအားပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Featured Collectives
Modern platform for artists who want to share/ promote their photography artworks. We mainly focus on Street and Fine Art Photography. You can share your artworks on our website's submission page.
Monthly Archives Select Month October 2020 (8) September 2020 (23) August 2020 (34) July 2020 (87) June 2020 (81) May 2020 (55) April 2020 (21) March 2020 (55) February 2020 (58) January 2020 (48) December 2019 (40) November 2019 (48) October 2019 (46) September 2019 (45) August 2019 (48) July 2019 (44) June 2019 (52) May 2019 (62) April 2019 (67) March 2019 (34) February 2019 (37) January 2019 (49) December 2018 (45) November 2018 (45) October 2018 (49) September 2018 (54) August 2018 (52) July 2018 (50) June 2018 (71) May 2018 (99) April 2018 (122) March 2018 (113) February 2018 (107) January 2018 (115) December 2017 (142) November 2017 (143) October 2017 (135) September 2017 (117) August 2017 (84) July 2017 (92) June 2017 (94) May 2017 (80) April 2017 (91) March 2017 (78) February 2017 (71) January 2017 (83) December 2016 (104) November 2016 (76) October 2016 (64) September 2016 (61) August 2016 (62) July 2016 (63) June 2016 (56) May 2016 (73) April 2016 (103) March 2016 (143) February 2016 (81) January 2016 (80) December 2015 (65) November 2015 (50) October 2015 (75) September 2015 (71)